Fandaharam-bola amin'ny zotram-pamantaran'ny GAZİBİS sy Transaction an'ny mpikambana | RayHaber | Railway | Highway | telegrama fiara
HomeTORKIAFaritra atsimo atsinanan'i Anatolia27 GaziantepFandaharam-bola amin'ny zotram-pamantaran'ny GAZİBİS sy fifanakalozana amin'ny mpikambana
07 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 27 Gaziantep, Faritra atsimo atsinanan'i Anatolia, ANKAPOBENY, Highway, Tire Wheel Systems, TORKIA 0
tarif sy tarika mpikambana
Gazety Metropolitan Gaziantep, mba hampiroborobo ny fampiasana bisikileta ho fitaovam-pitaterana ary koa fialamboly sy fanatanjahantena; Ny GAZİBİS dia mikendry ny hanaparitaka ny Bisiklet Smart Bike Sharing System manerana an'i Gaziantep, ka manome fitaterana mahasalama sy mahasoa ny tontolo iainana ho an'ireo tia bisikileta rehetra.
Amin'ny alàlan'ny rafitra mizara bisikileta Smart, tsy voatery hitondra bisikileta miaraka aminy ny mpitia bisikileta, afaka manofa bisikileta avy amin'ny gara GAZİBİS izy ireo ary mamela azy ireo any amin'ny toby GAZİBİS.
Inona ny rafitra Bike Smart?
Izy io dia rafitra fizarana bisikileta maharitra izay ampiasaina ho fomba hafa fitaterana ireo mpitia bisikileta amin'ny metropolisy marobe, manafoana ny filàna fitaterana bisikileta amin'ny alàlan'ny fanohanana amin'ny angona teknolojia ary azo ampidirina ao anaty tamba-jotra fitaterana ao an-tanàna.
Ny tanjon'ity rafitra ity dia ny ahazoana dia lavitra ny 3 - 5 km lavitra nefa tsy mila mitondra fiara mandeha moto. Amin'izany fomba izany, hampihena ny vesatra amin'ny fitateram-bahoaka sy ny fiantraikan'ny entona manodinkodina amin'ny tontolo iainana ary ny fiarahamonina dia hanana fotoana hampiasa ny fomba fitaterana mahasalama sy milamina kokoa.
Ahoana no fomba hahalasa ny mombamomba ny GAZİBİS System?
Kalealti, Stadium, 15 Jolay, Manoglu Park (SankoPark), Masal Park, Wonderland ary Gaün 7 napetraka miaraka amin'ny rafitra bisikileta 108, dia azo raisina avy amin'ny varotra rehetra an'ny Gaziantep Card Sales Gaziantep Full Card, izay hita ao Balikli (ao ambadiky ny Mosary Omeriye) Gaziantep Card Personalization Ampiasaina miaraka amin'ny karatra fihenam-bidy sy carte de crédit. Tsy azo ekena izany amin'ny karatra maimaimpoana. Ny tahan'ny fatra isan'ora dia heverina ho 1 TL.
Raha toa ianao ka mpikambana ao amin'ny rafitry ny Gazibis, dia afaka mamindra ny fahazoanao miditra amin'ny Gaziantep Card. Ny hany tsy maintsy ataonao dia ny fisoratana anarana ho an'ny rafitra Gazibis miaraka amin'ny karatra Gaziantep amin'ny alàlan'ny peo amin'ny Internet izay azonao atao ny mameno ny minitra 5.
Mandritra ny maha-mpikambana azy dia voaray ny mombamomba manokana ary anaovana sonia ilay fifanarahana. Ny fampahalalana momba ireo antsipirihany ireo dia azo jerena ao amin'ny rindrambaiko kiosk ary koa amin'ireo toeram-pianarana izay misy takelaka fampahalalana.
Ny fanomezan-dàlana misokatra amin'ny 25 TL dia namboarina avy amin'ny karatra fividianana miaraka amin'ny carte de crédit, ary aorian'ny fiverenan'ny bisikileta, aorian'ny fampihenana ny saram-pamoahana dia esorina ny vola sisa tavela miaraka amin'ny paikadinin'ny banky. Ny carte de crédit dia tsy maintsy misokatra ho an'ny fividianana virtoaly.
Ny biraon'ny bisikileta 7 dia manara-maso ny fakantsary marobe 15. Ny fitantanana sy ny fikojakojana ny bisikileta 108 dia tanterahin'i Gaziulaş.
Ny bisikileta azo avy amin'ny toby rehetra dia azo avela any amin'ny onjam-peo hafa. Bisikileta 3 azo aofa amin'ny carte de crédit ary 1 ihany no afaka manofa carte Gaziantep. Ny fotoana fiverenana aorian'ny fividianana ny bisikileta dia voafetra amin'ny ora 24. Raha ny vanim-potoana 24 dia heverina ho fanakorontanana, hisy ny fikomiana amin'ny heloka bevava, izay tafiditra ao anatin'ny fifanarahana.
FANAMARIHANA: Ny serivisy ho an'ny mpikambana ao amin'ny Internet dia tokana ho an'ireo voasoratra ao Gaziantep. Ireo izay voasoratra anarana any amin'ny tanàna hafa dia tokony ho tonga any amin'ny Gaziantep Card Central Branch ary hanao ny maha-mpikambana azy ao amin'ny Gaziantep Card. Ny fisoratana anarana avy amin'ny Gaziantep Card Processing Center dia maimaimpoana maimaim-poana, ampy ny hanananao ny karapanondronao sy ny Kartio Gaziantep. Raha mbola tsy manana Gaziantep Card ianao dia azo atao ny fahazoana azy avy amin'ny Gaziantep Card Transaction Center amin'ny sarany.
GAZIBIS Fandraisana miaraka amin'ny Gaziantep Card
Efa ao anaty rafitra Gaziantep Card izao i Gazibis. Afaka mampiasa ny kaontinao Gaziantep ianao (ankoatra ireo karazana karatra maimaim-poana / maimaim-poana) izay ampiasinao amin'ny fidirana fiara fitateram-bahoaka, tram ary pasipaoro hafa hampanofa bisikileta avy any Gazibis.
Raha toa ianao ka mpikambana ao amin'ny rafitry ny Gazibis, dia afaka mamindra ny fahazoanao miditra amin'ny Gaziantep Card. Ny hany tsy maintsy ataonao dia ny fisoratana anarana ho an'ny rafitra Gazibis miaraka amin'ny karatra Gaziantep amin'ny alàlan'ny peo amin'ny Internet izay azonao atao ny mameno ny minitra 5. Afaka manomboka manomboka amin'ireo safidy manaraka ireto ianao.
Raha manana fanontaniana momba ny telefaona 0342 329 45 45 ary 0533 784 27 27 dia afaka mahazo fanampiana haingana avy amin'ny tsipika whatsapp ianao.
FANAMARIHANA: Ny serivisy ho an'ny mpikambana amin'ny alàlan'ny endrika internet dia mety ho an'ireo manana fisoratana anarana ao Gaziantep ihany. Ireo izay mipetraka amin'ny tanàna hafa dia takiana amin'ny alàlan'ny Gaziantep Card Central Branch ary hanao ny fahazoany ny mombamomba azy ao amin'ny Gaziantep Card. Ny fisoratana anarana avy amin'ny Gaziantep Card Processing Center dia maimaimpoana maimaim-poana, ampy ny hanananao karatra maha-anao sy Gaziantep Card anao. Raha mbola tsy manana Gaziantep Card ianao dia azo atao ny fahazoana azy avy amin'ny Gaziantep Card Transaction Center amin'ny sarany.
GAZİBİS Ahoana no hanofaana?
Ahoana ny fomba hividianana bisikileta miaraka amin'ny Gaziantep karatra avy amin'ny gara GAZİBİS?
1. STEP:Safidy karazana fifidiana: tsindrio Al Buy Bisikileta »bokotra.
2. STEP : Fihenam-bidy Gaziantep na karatra feno HOZY REHETRA Tandremo ny faritra. Misy dingana 5 segondra izany dingana izany.
STEP 3:Ampidiro ny teny miafina karatra Gaziantep anao. (Ity tenimiafina ity dia nalefa tamin'ny findainao nandritra ny fisoratana anarana an-tserasera.)
STEP 4:Raha tsy voasakana ny karatrao ary manana fifandanjana ampy ianao (farafahakeliny 5 tl) ny rafitra dia hanome bisikileta ho anao. Afaka mahita ny isan'ny bisikileta eo amin'ny efijery ianao. Ny rafitra dia mifidy ny bisikileta io tenany.
STEP 5:Azonao atao ny manangona ny bisikileta amin'ny isa izay aseho eo amin'ny fampisehoana amin'ny alàlan'ny fanesorana azy amin'ny slot hidy ao anatin'ny segondra 20. Ny jiro LED mena amin'ny hidy dia tokony hivadika maitso. Raha tsy voaray segondra vitsy ny 20 dia hikatona ny rafitra. Amin'ity tranga ity dia avereno ny dingana. Tsy misy sarany fanampiny.
STEP 6:Zahao ny fahamarinan'ny bisikileta ao anatin'ny segondra 60 taorian'ny fakana azy. Raha tsy misy olana dia afaka manomboka mampiasa azy ianao. Azafady mba avereno izany raha misy ny lesoka. 60 dia maimaim-poana amin'ny bisikileta tafaverina ao anatin'ny segondra. (Azafady mba jerenao ilay bisikileta tianao hovidinao aloha.)
FANAMARIHANA: Azonao atao ihany koa ny manatanteraka ny dingana etsy ambony miaraka amin'ny bokotra 'HODIAVITRA MIFIDIAVINA'.
REHEFA MITIAVANA; Rehefa tapitra ny fandidiana, aorian'ny fampahalalana ny fahombiazana mahomby aseho eo amin'ny efijery, mandehana amin'ny bisikileta nofaritano sy alao ny bisikileta avy amin'ny slot. Ny bisikileta 1 (iray) ihany no azo amidy amin'ny karatra maha-mpikambana.
Ahoana ny fomba hividianana bisikileta miaraka amin'ny carte de crédit avy amin'ny gara GAZİBİS?
I 1.A:Safidy karazana fandidiana: kitiho ny bokotra "Buy Card karatra".
2. STEP:Ampidiro eo amin'ny efijery ny nomeraon-telefaona ary hikasika ny bokotra fanamafisana.
3. STEP:Ampidiro ny fampahalalana miditra amin'ny carte de crédit sy ny isan'ny bisikilety tianao hofan-trano eo amin'ny efijery, ary tsindrio ny bokotra Confirm.
4. STEP:Ampidiro ny kaody fanamarinana nalefa an-telefaona amin'ny alàlan'ny SMS ary tsindrio ny bokotra fanamafisana.
5. STEP:Ampidiro ny isan'ny bisikileta tianao hofan-trano ary tsindrio ny bokotra Confirm.
6. STEP:Aorian'ny fisehoan'ny fampahalalana mahomby dia mivoaka eo amin'ny efijery, mandehana amin'ny bisikileta voatondroo ary esory ny bisikileta amin'ny slot ao anatin'ny segondra 20. Ny jiro LED mena amin'ny hidy dia tokony hivadika maitso. Raha tsy voaray segondra vitsy ny 20 dia hikatona ny rafitra. Amin'ity tranga ity dia avereno ny dingana. Tsy misy sarany fanampiny.
Ahoana ny famerenany bisikileta ho ao amin'ny kianja GAZ GABİS
STEP 1:Apetraho amin'ny iray amin'ireo teboka hidy foana ny bisikileta ampiasainao. Ny toerana misy ny toby na fanidy dia mety ho samy hafa.
STEP 2:Rehefa avy mametraka ianao dia miandrasa manodidina ny segondra 5 ary ho hitanao fa mena ny LED ao amin'ny faritra hidin-trano.
STEP 3:Ataovy azo antoka fa mihidy ilay bisikileta amin'ny alàlan'ny fanalana azy kely. Raha tsy mihidy ny bisikileta, manandrama teboka hidin-trano hafa.
STEP 4:Rehefa avy nanidy ny bisikileta ianao, azafady tsindrio ny bokotra "BICYCLE DROP" mba hanilihana ny bisikiletanao avy ao anaty karatra Gaziantep anao.
(Raha nividy tamin'ny carte de crédit ianao dia hahazo hafatra an-tsoratra amin'ny telefaona findainao na dia efa navotsotra aza ny bisikileta. Tsy mila mampiasa bokotra IR BICYCLE DROP ianao.)
STEP 5:Vakio amin'ny mpamaky ny carte de Gaziantep anao. Mety hahatratra segondra 3 izany, aza manongotra ny karatrao ary avelao ny toby mialoha ny fahavitany. (Tsy ilaina io fifanakalozana io raha raisina miaraka amin'ny carte de crédit.)
FANAMARIHANA: Tsy azo vidina ny bisikileta vaovao raha tsy vita ny dingana miverina amin'ny bisikileta !!! Aorian'ny fiverenana Na dia tsy vakiana aza ny karatra, ny rafitra no mamaritra ny fandoavana arakaraka ny fotoana naverin'ilay bisikileta niverina tany am-baravarana. Tsy misy fotoana fanampiny ampiana.
Raha manana olana amin'ny bisikiletanao
STEP 1:Raha misy olana ny bisikileta dia avelao hiverina any amin'ny toerana tsy misy banga intsony ny bisikileta ao anatin'ny iray (1) minitra. Tsy misy vidiny.
STEP 3:Ataovy azo antoka fa mihidy ilay bisikileta amin'ny alàlan'ny fanalana azy kely.
STEP 4:Mba hividianana bisikileta indray, afatory ny karatrao avy ary alàlan'ny basikety hafa isa hita ao amin'ny efijery.
STEP 5:Aorian'ny fisavana ny bisikiletanao dia afaka miala amin'ny biraonao ianao.
Azafady, jereo ny bisikileta tianao hividy aloha !!!
Fandefasana maimaimpoana miaraka amin'ny GAZIBIS
Ny pasipaoronao voalohany ho an'ireo fiara fitateram-bahoaka sy toby fiasa izay ampiasain'ny Gaziulaş dia maimaim-poana ao anatin'ny ora iray taorian'ny ora hanakaranao ny bisikiletanao mampiasa ny Gaziantep Card anao. Midika izany fa rehefa manao ampahany amin'ny dianao amin'ny bisikileta ianao ary ampahany amin'ny fitateram-bahoaka, dia mandoa bisikileta ihany ianao.
Tobin'ny Kalealtı Gazibis
Station Gazibis Station
Station Station Wonderland Gazibis
Station Gazibis University
Fiantsonana demokrasia demokrasia
Hiditra amin'ny sarintany Gazibis eto Tsindrio eto!
Fiara SAKBİS, Fandaharam-bola amin'ny fandoavam-bola ary fifanakalozana 07 / 11 / 2019 Ho fampiroboroboana ny fampiasana bisikileta ho fomba fitaterana ankoatry ny tanjona fialamboly sy fanatanjahantena, Sakarya Metropolitan Munisipaly; Ny SAKBİS dia mikendry ny hanitatra ny Bisiklet Smart Bike Sharing System manerana an'i Sakarya ka sağlıklı
Fiara KAYBationsS, Fandaharam-bola amin'ny fandoavam-bola ary fifanakalozana amin'ny mpikambana 07 / 11 / 2019 Kayseri Metropolitan Munisipaly, mba hampiroborobo ny fampiasana bisikileta ho fitaovam-pitaterana ary koa fialamboly sy fanatanjahantena; KAYBİS dia mikendry ny hanitatra ny "Smart Bike Sharing System" manerana an'i Kayseri ka izany no sağlıklı
Nextbike Konya Smart bisikileta 07 / 11 / 2019 Nextbike Konya, mba hampiroborobo ny fampiasana bisikileta ho fitaovana fitaterana ankoatry ny fampiasa amin'ny fialamboly sy fanatanjahantena; Nextbike Konya ayı Smart System fizarana bisikileta Konya hiparitaka manerana an'i Konya, ka mahasalama…
Fiara BISIM, fandaharana fandoavam-bola ary fifanarahana mpikambana 07 / 11 / 2019 Nandray ny dingana manan-danja mankany amin'ny tanjon'ny Bisiklet İzmir, tanànan'ny bisikileta İzmir, ny fahalianan'ny BİSİM, ny rafitry ny bisikileta izay nataon'i İzmir Metropolitan Munisipaly tamin'ny 18 Janoary 2014 ary efa nanofa vola 2 tapitrisa ka hatramin'izao
Fiantsonan'ny ANTBIS, Fandaharam-bola amin'ny fandoavam-bola ary fifanakalozana amin'ny mpikambana 07 / 11 / 2019 Kaominin'i Antalya Metropolitan, mba hampiroborobo ny fampiasana bisikileta ho fitaovam-pitaterana ary koa fialamboly sy fanatanjahantena; Ny ANTBIS dia mikendry ny hanitatra ny Bisiklet Smart Bike Sharing System manerana an'i Antalya ka amin'ny sağlıklı
Nextbike Konya Smart bisikileta
Fiara SAKBİS, Fandaharam-bola amin'ny fandoavam-bola ary fifanakalozana
Fiara BISIM, fandaharana fandoavam-bola ary fifanarahana mpikambana
Fiantsonan'ny ANTBIS, Fandaharam-bola amin'ny fandoavam-bola ary fifanakalozana amin'ny mpikambana
Ny fandaharam-bolan'ny SME Stations sy ny fifandraisan'ny mpikambana
Rafitra nomen'ny komisiona Marmaray, Stadion marmaray ary fandaharam-potoan'ny fandaniam-bola marmaray
Fandaharana fandoavam-bola amin'ny Istanbul Night
Fandefasana tari-dàlana vaovao ho an'ny fiara fitaterana fiara any Kocaeli
News Archive Safidio ny volana Novambra 2019 (273) Oktobra 2019 (608) September 2019 (557) August 2019 (509) Jolay 2019 (634) June 2019 (502) May 2019 (526) April 2019 (419) March 2019 (521) Febroary 2019 (483) Janoary 2019 (502) Range 2018 (620) Novambra 2018 (504) Oktobra 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) Jolay 2018 (506) June 2018 (582) May 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) Febroary 2018 (500) Janoary 2018 (557) Range 2017 (509) Novambra 2017 (426) Oktobra 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) Jolay 2017 (479) June 2017 (477) May 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) Febroary 2017 (477) Janoary 2017 (538) Range 2016 (487) Novambra 2016 (631) Oktobra 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) Jolay 2016 (485) June 2016 (661) May 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) Febroary 2016 (855) Janoary 2016 (751) Range 2015 (799) Novambra 2015 (640) Oktobra 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) Jolay 2015 (504) June 2015 (535) May 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) Febroary 2015 (878) Janoary 2015 (1076) Range 2014 (963) Novambra 2014 (826) Oktobra 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) Jolay 2014 (911) June 2014 (735) May 2014 (957) April 2014 (971) March 2014 (864) Febroary 2014 (720) Janoary 2014 (733) Range 2013 (664) Novambra 2013 (656) Oktobra 2013 (547) September 2013 (570) August 2013 (533) Jolay 2013 (661) June 2013 (577) May 2013 (734) April 2013 (1058) March 2013 (1101) Febroary 2013 (811) Janoary 2013 (905) Range 2012 (911) Novambra 2012 (1167) Oktobra 2012 (829) September 2012 (886) August 2012 (970) Jolay 2012 (859) June 2012 (591) May 2012 (445) April 2012 (562) March 2012 (699) Febroary 2012 (546) Janoary 2012 (417) Range 2011 (149) Novambra 2011 (35) Oktobra 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) Jolay 2011 (18) June 2011 (16) May 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) Febroary 2011 (24) Janoary 2011 (13) Range 2010 (335) Novambra 2010 (11) Oktobra 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) Jolay 2010 (9) June 2010 (19) May 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) Febroary 2010 (303) Janoary 2010 (1838) Range 2009 (4) Novambra 2009 (1) Oktobra 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) May 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) Febroary 2009 (4) Janoary 2009 (3) Novambra 2008 (1) Oktobra 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) Jolay 2008 (2) June 2008 (2) May 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) Febroary 2008 (5) Janoary 2008 (2) Range 2007 (2) Oktobra 2007 (2) Jolay 2007 (1) May 2007 (1) April 2007 (1) Febroary 2007 (2) Janoary 2007 (1) Range 2006 (1) Oktobra 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) May 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) Novambra 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) Febroary 2005 (1) Janoary 2005 (1) Range 2004 (1) Oktobra 2004 (3) Jolay 2004 (1) May 2004 (2) Range 2003 (1) Oktobra 2003 (1) May 2003 (1) March 2003 (1) Febroary 2003 (1) Janoary 2003 (1) Range 2002 (1) Oktobra 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) Janoary 2002 (2) Jolay 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) May 2000 (3) March 1999 (1) Oktobra 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) Oktobra 1996 (1) August 1996 (2) May 1995 (1) August 1992 (1) May 1990 (1)